/blog/gallery/Nootropic Coluracetam: Otu esi arụ ọrụ na Brain ma na-emeso nchegbu
Ihe na 03 / 17 / 2021 by 阿斯劳 dere na gallery.
Racetam Ezinụlọ nke Nootropic– Coluracetam
Coluracetam (BCI-540, ma ọ bụ MKC-231) bụ abụba-soluble nootropic na racetam-klas nke ogige. Coluracetam dị ike karịa nke racetam mbụ, Piracetam. Colitscetam ka Mitsubishi Tanabe Pharma nke Japan nabatara na 2005. Na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime usoro nootropics kachasị ọhụrụ nke racetam.
E mechara resị patent nke Coluracetam na BrainCells, Inc. na San Diego, California. BrainCells bụ obere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta ihe na-emepe emepe maka ịgwọ ọrịa isi nkụda mmụọ (MDD), ịda mbà n'obi ọgwụgwọ (TRD), na Ọrịa Alzheimer.
Coluracetam yiri ka ihe owuwu Piracetam. Dịkwa ka racetam nootropics niile, nwere pyrrolidone nucleus na isi ya. Nchoputa ogwu ohuru ohuru na egosiputa ikike maka ịgwọ nsogbu ịda mba, na mmebi akwara na akwara.
Coluracetam dị ike choline ezubere iche supplement. Ọ na - eme ka mgbanwe ntụgharị ụbụrụ gị dị na acetylcholine (ACh) site na usoro nnabata choline (HACU) dị elu. Nke na-eme ka ịmụrụ anya, tinye uche na nkọwa na ebe nchekwa.
Researchfọdụ nnyocha, na ahụmịhe onwe onye na-egosi Coluracetam nwere ike imetụta ndị na-anabata AMPA. Na-eme ka ọ bụrụ nke ampakine nootropic. Nke nwere ike ịkọwapụta mmetụta ndị na-akpali akpali na-enweghị mmetụta ndị na-akpali akpali nke ọdịnala. Coluracetam na-egosikwa ụfọdụ àgwà nchegbu (mgbochi nchegbu) na-enyere aka melite ọnọdụ na ịgbachi nkịtị.
Kedu Coluracetam ọrụ(Usoro nke Action)
Dị ka ọtụtụ ogige racetam, coluracetam (CAS:135463-81-9) na-arụ ọrụ tumadi site na ịba ụba nke neurotransmitter acetylcholine, nke metụtara njikọta na mmụta, ncheta, na cognition.
Otú ọ dị, ụzọ nke coluracetam na-agbanwe usoro acetylcholine bụ ihe pụrụ iche. Dị ka ọ na-adị, racetams na-ebute mmepụta acetylcholine site na ịkpali ndị nnabata kwesịrị ekwesị, mana coluracetam na-eme nke a site na ime ka njikọ dị elu dị elu, ma ọ bụ HACU. Sistemụ HACU na-ekpebi ọnụọgụ nke a na-adọta choline n'ime eriri maka ntụgharị n'ime acetylcholine.
Site na ịba ụba nke choline na-adọrọ n'ime sel akwara, coluracetam na-akwalite mmepụta acetylcholine ma na-akpata ọkwa ụbụrụ nke neurotransmitter a dị oke mkpa ịrị elu. iji nweta nnweta choline ngwa ngwa.
Ihe omume ndị a ọnụ na-eduga n'ọkwa dị elu nke acetylcholine, nke jikọtara na cognition na ebe nchekwa dị elu.
uru na mmetụta Of Coluracetam
❶ Coluracetam na-eme ka ncheta na mmụta dị mma
Uru Coluracetam gosipụtara ịrụ ọrụ na ịmanye arụmọrụ na ncheta na oke na mmetụta yiri ya na ụmụ mmadụ. Brain Cells Inc. mere nnyocha nke na-ekpughe mmụba nke uche na oke mgbe ha natara AF64A ruo ụbọchị asatọ. Mmepe ahụ gara n'ihu na-adịgide ọbụna karịa ọgwụgwọ. Ọrịa Alzheimer na-eduga na ogo nke acetylcholine. Site na eto acetylcholine na hippocampus, coluracetam ga-abawanye mgbaàmà nke ọrịa Alzheimer dịka nsogbu mmụta na ncheta na-adịghị mma.
❷ Coluracetam Na-ebelata Ọgwụ Na-eguzogide Obi
N'ime nnyocha nke ndị mmadụ 101 nwere nkụda mmụọ, ndị na-enwetaghị ọgwụgwọ ọgwụgwọ na antidepressants, ọ nwere mmetụta na-ewuli elu na mgbanwe dị mma na ndụ na 80 mg 3 ugboro ugboro n'ụbọchị. Otú ọ dị, nke a bụ nanị ọmụmụ banyere ụmụ mmadụ. Ikike o nwere iji belata oke nchegbu glutamate nwere ike ịbụ ihe kpatara maka mmetụta dị mma ya na ọgwụgwọ ịda mbà n'obi.
❸ Coluracetam Na-ebelata Nchegbu
N'ime ọmụmụ oke, dosing ụbọchị 21 nke coluracetam na-egosi mmụba 20% na nchekasị, nke dị elu karịa mmetụta 12% valium na otu mkpụrụ ọgwụ n'otu ọmụmụ ahụ.
❹ Coluracetam Na-akwalite Neurogenesis
Studiesfọdụ ọmụmụ kwuru na ọ na-enyere aka na neurogenesis. Usoro izizi ka edoghị anya, mana ọ metụtara nchịkwa ya ruo ọtụtụ izu, nke na-abawanye na acetylcholine na mpaghara hippocampus. '' Ikike nchọpụta kwuru na ọ na-akwalite uto mkpụrụ ndụ akwara (neurogenesis). A maghị usoro ahụ, mana echere na ọ ga - emetụta ụba nke hippocampal acetylcholine mgbe a na - atụgharị coluracetam kwa ụbọchị maka izu ole na ole.
❺ Coluracetam Na-enyere aka na Schizophrenia
Coluracetam na-eme ka ọrụ nke ChAT dị elu na oke nwere akwara cell. Mmụba a na-egosi na ọ nwere ike ịbara ndị ọrịa nwere mmerụ ahụ uru site na otu enzyme a. Nnyocha ndị ọzọ na-emetụta ndị nwere isi ihe na-aga n'ihu.
❻ Coluracetam Na-eme ka Anya Na-ele Anya
Coluracetam egosila na ọ bụ ike ya dị ka njirimara agba, ọhụụ, na nghọta doro anya. Kpọmkwem, ọ na-akwalite uto akwara maka ọrịa retenerative retinal. Ọtụtụ nnyocha na-ekwu banyere ọhụụ agba ka mma na nkọ nkọ nke anya, mana ọ nweghị nyocha sayensị akwadoro mmetụta ndị a.
AASraw bụ ọkachamara na-emepụta nke Coluracetam.
Kedu ka Coluracetam si arụ ọrụ na Brain?
Coluracetam na-eme ka ahụike ụbụrụ na ọrụ dị n'ọtụtụ ụzọ. Ma abụọ akpan akpan kwụpụta.
Coluracetam na-eme ka ụbụrụ gị dị elu's choline uptake site na iche na ịrụ ọrụ na usoro dị elu choline (HACU) na ụbụrụ ụbụrụ.
Acetylcholine (ACh) nwere choline na acetate. Ndị a ga-adị ka ndị neuron ọnụ na mgbe niile. Ka e wee nwee ike wepụta ACh mgbe ọ bụla achọrọ ya.
Free choline na-ekesa n'ime ọbara na-agafe mgbochi ụbụrụ ọbara. Ma na-ewere ya site na njedebe cholinergic neuron. A na-etinye ya na neuron site na usoro nnabata elu (HACU) dị elu. Nchịkọta nke ACh na-ewere ọnọdụ na synaptic cleft. Oghere dị n’agbata akwara ozi ka ọ na-abanye n’ime akwara ozi.
Usoro HACU bụ okpomọkụ-, ike-, na sodium na-adabere. Usoro ihe a bu uzo mbu eji choputa nke ACh bu uzo. Ọ bụrụ na usoro a etisasị ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka e siri kee ya, ị ga-enwe nsogbu na ncheta, mmụta, na ụbụrụ ụbụrụ.
Coluracetam na-emetụta usoro a ma na-enyere ya aka ịrụ ọrụ nke ọma. N'ezie, ọ dị ka ọ na-eme ka usoro HACU dịkwuo elu. Ọbụna na akwara ozi mebiri emebi. Abawanye acetylcholine na akwara ozi na-enyere aka melite ncheta, na-eme ka cognition nwee ike ma na-enye mma ime mkpebi.
Coluracetam yikwara ka ọ na-emeziwanye ike AMPA. Ndị na-anabata AMPA na-emetụta glutamate. Nke na - arụ ọrụ n’ime ụbụrụ na sistem ụjọ nke etiti iji melite ịmụrụ anya na cognition.
Coluracetam na-arụ ọrụ ma ikike AMPA na nkwalite choline. Nchikota a yiri ka ọ na-enyere aka melite nsogbu ọnọdụ uche na-enweghị emetụta ogo nke serotonin.
Serotonin Selective Reuptake Inhibitors (SSRIs) bụ usoro kachasị mma maka usoro ọgwụgwọ maka ịme ihe banyere ọnọdụ uche na ịda mba. Ha na ndepụta nke mmetụta dị njọ na - abịa. Anaghị arụ ọrụ maka onye ọrịa ọ bụla dara mbà.
Ndị nchọpụta kwuru na Coluracetam bara uru n'ịgwọ nnukwu ịda mbà n'obi na nsogbu nchegbu. Na-enweghị emetụta ogo serotonin na ụbụrụ. Na enweghị mmetụta ndị na-aga na-akpaghasị serotonin.
Coluracetam Ojiji: Ọnọdụ na Stack N'ihi Reference naanị
Coluracetam bụ onyinye anaghị ahụ na nri ọ bụla ma ahụ anyị enweghị ike ịmịpụta ya. N'ihi ya, nanị otu ụzọ isi nweta uru nke molekul a bụ site na mgbakwunye.
A na-erekarị Coluracetam na ntụ ntụ ma ọ bụ ụdị capsule ma nwee ike iji ọnụ kwuo ya. A na-ejikwa ihe dị iche iche (n'okpuru ire) iji dozie ngwa ngwa maka ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ebe ọ bụ na coluracetam bụ onye ọrụ kachasị ike, ọ ga-adị mma ịmalite site na iji ọgwụ kachasị dị ala. Ọ bụrụ na ịchọta na ịchọrọ ịkwalite ọgwụ ahụ ka ị wee nwee mmetụta nke uru ya, a ga-eme nke a nwayọ nwayọ ma ghara ịgafe 80mg.
Coluracetam bụ nke na-adịghị egbu egbu ma were ya dị ka ihe nchekwa ma nwee ndidi. Mmetụta ndị a dị obere ma na-emekarị naanị mgbe enweghị nnukwu ọdọ mmiri nke choline zuru oke iji mee maka njikọta acetylcholine. Nke a bụ ya mere anyị ji akwado ịmalite njikọ-mmụba coluracetam na nkwalite choline dị ka citicoline.
Coluracetam nwere ike iji ọgwụ ụfọdụ na-emekọrịta ihe, ọkachasị ndị na-emekọrịta ihe na NMDA. Nke a na-agụnye ndị na-egbochi ụkwara na ọgwụgwọ anesthetics. Ihe ndị ọzọ na - emekọ ihe na sistemụ cholinergic, dịka ịgwọ ọrịa glaucoma na nicotine, nwekwara ike iso mmetụta nke coluracetam na-emekọrịta ihe. Coluracetam nwere ike igbochi mmetụta nke ọgwụ mgbochi cholinergic (dị ka ụfọdụ Benadryl, ụfọdụ ọgwụ mgbochi na ọgwụ ọgwụ Parkinson).
Dị ka mgbakwunye ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-a medicationụ ọgwụ ma ọ bụ nwee ahụike na-apụtaghị ìhè, ọ bụ ihe ezi uche dị na ị gwa dọkịta gị tupu ịmalite ihe ọ bụla mgbakwunye ọchịchị.
※ Olee otú Iji Nchekwa Well Wimp Ọgwụ ndị ọzọ
Coluracetam bụ molekul nwere ike ịta abụba, yabụ, ọ ga-akachasị abụba na abụba ahụike dịka aki oyibo ma ọ bụ mmanụ MCT.
Coluracetam kwesịkwara ịkwado ya na a nhazi choline dị ka citicoline. Citicoline na-abawanye ọdọ mmiri nke choline dịnụ maka njikọ. Nchịkọta ahụ nwere ike ịmepụta mmetụta dị ike site na ịbawanye choline dị (citicoline) na ike ịkọwa ya n'ime acetylcholine (coluracetam).
※ Na-atụ aro Dose: 5-80mg kwa ụbọchị
Anyị na-akwado n'etiti 5-80mg nke coluracetam kwa ụbọchị.
Oke nchekwa dị mma maka coluracetam bụ 80mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, anyị na-akwado ịnọnyere 35mg kwa ụbọchị dị ka nsonaazụ nke usoro dị elu ka na-enyochabeghị ụmụ mmadụ.
Ọ kachasị mma iji kewaa usoro ndị a n'ime ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie. Dịka ọmụmaatụ, 20mg dose 10mg n'ụtụtụ na n'ihu 10mg n'ehihie.
Dịka e kwuru na mbụ, ị kwesịrị ịmalite na njedebe dị ala nke usoro dosing. Mmalite nke ọgwụ kachasị dị irè ga-ebelata ohere ịnweta ahụmịhe ọ bụla na-adịghị mma.
Coluracetam anaghị egbu egbu. A na-ahụta ya nke ọma ma dịkwa mma. Ọtụtụ ndị ọrụ oge mbụ nke Coluracetam na-akọ ike ọgwụgwụ nke na-abụkarị nsonaazụ nke ịmalite site na ọgwụ dị oke oke.
Cheta, Coluracetam na-arụ ọrụ site na ime ka choline na-ebute ụbụrụ gị. Choline bu ihe mmeputara n’iru n’aru acetylcholine. Ọ bụrụ na ezughị oke dị na sistemụ gị, ị ga-enwe mmetụta ndị ahụ.
Mmetụta dị iche iche dị ụkọ kama ọ nwere ike ịgụnye nchekasị, ike ọgwụgwụ, isi ọwụwa, ụjọ na ọgbụgba. Ọzọkwa, mmetụta ndị ọzọ na-abụkarị n'ihi nsụgharị dị iche iche dị elu nke nootropic.
Isi ọwụwa site na iji Coluracetam na-emekarị mgbe ịchefuru ijikọta ya na ezigbo mgbakwunye choline. Isi ọwụwa na-abụkarị ihe mgbaàmà nke ụkọ choline na ụbụrụ gị.
Isi - Coluracetam
Coluracetam bụ otu n'ime ndị ọhụrụ na ndị na-amachaghị nke òtù racetam nootropics, ma ọ bụ ọkacha mmasị na ọtụtụ ndị ọrụ.
Ọ na - eme ka ogo nke '' mmụta neurotransmitter '' acetylcholine, nke nwere ike ịkwalite cognition, na ọmụmụ ụmụ anụmanụ na-egosi na ọ nwere ike iwepụ nrụrụ ncheta na-enweghị mmetụta dị egwu. Agbanyeghi na enweghi ihe edere ederede banyere mmadu na coluracetam, ihe omumu nke di na-egosi na o nwere ike buru ihe bara uru maka nsogbu na obi ida mba.
Ọtụtụ ndị ọrụ tụkwasịrị ya obi dị ka onye na - ebuli ọnọdụ na ntụkwasị obi nke na - enye ha ezi nlebara anya na itinye uche. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ na-enye ha nha anya nke "HD ọhụụ", na-eme ka agba na-enwu gbaa, iche iche nke ukwuu, na ọkụ ndị ọzọ radiant.
Coluracetam bụ nnukwu ihe nwere ike, yabụ ọnụọgụ ọgwụ dị ala, ọ makwaara na ọ na-eme ngwa ngwa. A na-ere ya dị ka nri mgbakwunye na United States ma enwere ike ibubata ya na Canada na UK na obere ego.
A ka nwere ọtụtụ ihe a ga-amụta banyere coluracetam, mana ọ dị ka ọ dị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ejiri ha kpọrọ ihe. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị itinye ihe ọhụrụ na nke gị tootropic tojupụtara, coluracetam nwere ike ịbụ otu ị ga-atụle.
Coluracetam enweghị ọtụtụ nyocha, ọmụmụ ihe dịnụ na-egosi nnukwu ohere iji ya. Ọ bụ otu n'ime racetams kachasị ọhụrụ na-adịbeghị anya, n'akụkụ n'akụkụ Fasoracetam. Otú ọ dị, n'oge na-adịbeghị anya, FDA kwadoro ụdị "ọganihu" nke Fasoracetam maka ọgwụgwọ ADHD.
 Brauser D. “Neurogenesis-akpali akpali ogige Gosi nkwa na ọgwụgwọ nke nnukwu ịda mba” Medscape Medical News September 21, 2009
 Murai S., Saito H., Abe E., Masuda Y., Odashima J., Itoh T. Akwụkwọ nke Neural Transmission General Section. 231; 1994 (98): 1-1.
 Takashina K., Bessho T., Mori R., Eguchi J., Saito K. "MKC-231, choline uptake enhancer: (2) Mmetụta na njikọ na ntọhapụ nke acetylcholine na ụmụ oke AF64A." Akwụkwọ nke Neural Transmission (Vienna). 2008 Jul; 115 (7): 1027-35.
 Bessho T., Takashina K., Eguchi J., Komatsu T., Saito K Akwụkwọ nke Neural Transmission (Vienna). 231 Jul; 1 (64): 2008-115.
 Akaike A., Maeda T., Kaneko S., Tamura Y.. Akwụkwọ akụkọ Japanese nke Ọgwụ. 231 Feb; 1998 (76): 2-219
 Shirayama Y, Yamamoto A, Nishimura T, Katayama S, Kawahara R (Septemba 2007). "Ngosiputa ihe na-eme ka choc uptake enhancer MKC-231 na-emegide mmejọ omume nke phencyclidine na mbelata septal cholinergic neurons in rats". Neuropsychopharmacology nke Europe. 17 (9): 616–26.
 Onyinye Achọpụta Ahụike Kwesịrị Ekwesị nke State nke California, IRS.gov.
 Malykh, AG, & Sadaie, MR (2010). Piracetam na Piracetam-Dị ka Ọgwụ. Ọgwụ, 70 (3), 287-312.
Curcumin Derivative J-147 Na-emeso AD, Mgbochi ịka nká, Nsogbu Mgbakasị Obi (UN) Ezubere iche ọgwụ ọjọọ Ibrutinib: Gịnị Ka Know Maara